FAO si ay uga caawiso Uzbekistan horumarinta warshadaha baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Wasiirka Beeraha ee Uzbekistan Jamshid Khojaev ayaa la kulmay Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO) Vladimir Rakhmanin iyo Isuduwaha Qeybta-Gobol ee Bartamaha Aasiya - Wakiilka FAO ee Uzbekistan Viorel Gutsu.
Dhinacyadu waxay kala saxiixdeen Barnaamijka Qaab-dhismeedka Waddanka ee u dhexeeya FAO iyo Uzbekistan 2021-2025, Sputnik ayaa werisay.
Dukumiintigaani wuxuu hage u noqon doonaa ficillada howlaha FAO ee dheeri ah ee Uzbekistan.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu taageero jamhuuriyadda si loo gaaro ahmiyadaha istiraatiijiyadeed ee qaran ee la xiriira isbeddelka nidaamka cuntada. Tilmaamaha ugu muhiimsan waa horumarka loo wada dhan yahay ee raasamaalka aadanaha oo horseedaya caafimaad, wanaag iyo barwaaqo waarta, iyo sidoo kale horumar waara iyo horumar iyadoo la tixgelinayo isbedelka cimilada
Miisaaniyadda barnaamijka waa $ 17 milyan.
Sidoo kale, heshiis mashruuc cusub ayaa waxaa kala saxiixday Wasaaradda Beeraha ee Uzbekistan iyo FAO oo loogu talagalay soo celinta iyo horumarinta warshadaha baradhada ee jamhuuriyadda.
Taageerada wax soo saarka iyo maaraynta dalagyada bariiska, taageerada hirgelinta siyaasadaha beeraha ee loo dhan yahay ayaa la abaabuli doonaa.
Mashaariic cusub ayaa la fulin doonaa illaa sanadka 2023, wadartooda guud waxay ka badan tahay nus malyuun doolar.
Tags: horumarinta warshadaha baradhadaUzbekistanFAO